Décision N°3631/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 03 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique Analamanga dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. - ewa.mg
Décision N°3631/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 03 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique Analamanga dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA.
News - Santé - Décision N°3631/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 03 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique Analamanga dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA.
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Décision N°3631/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 03 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique Analamanga dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
L’article Décision N°3631/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 03 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique Analamanga dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Nihena ny firongatry ny valanaretina : miisa 14 ireo lavon’ny Covid-19 tao anatin’ny herinandro
Eo am-piandrasana ny hambaran’ny fitondram-panjakana manoloana ny ady atao amin’ny Coronavirus, nihena hatrany aloha izany ny firongatry ny valanaretina eto amintsika. Miisa 14 ireo lavo tao anatin’ny herinandro, nanomboka ny 15 aogositra ka hatramin’ny anio. Manodidina ny roa isan’andro eo izany. Tsy nisy aina nafoy aza ny 19 aogositra teo raha efatra kosa ny 20 aogositra. Iray kosa ny lavo, omaly sy ny alatsinainy lasa teo.Miisa 29 ireo lavo ny herinandron’ny 8 aogositra Mbola marobe anefa ireo maty raha ny herinandro mialoha izao, nanomboka 8 aogositra hatramin’ny 15 aogositra teo. Miisa 29 ireo lavon’ny Covid-19 tamin’izany. Nidan­gana mihitsy aza ny roa andro farany satria miisa 13 ireo namoy ny ainy, tao anatin’ny 48 ora. Tahaka izany koa, nidina hatrany ny tahan’ny fifindran’ny valanaretina tao anatin’ny herinandro. Miisa 452 izany tao anatin’ny herinandro. Nisy fotoana aza latsaky ny 100, miisa 65 sy 80 ary 81 sy 59 ireo tranga vaovao ny 15 sy ny 17 ary ny 19 sy ny 20 aogositra teo. Niakatra kosa anefa izany ny 16 sy ny 18 aogositra ka miisa 103 sy 123 ireo nifindran’ny valanaretina. Voa­ma­rika fa nikisaka tany Bongo­lava ny maro amin’ireo tranga vaovao ny 18 aogositra teo. Nisy tranga vaovao misa 40 any an-toerana raha 22 kosa ho an’ny eto Analamanga.Nihoatra ny 100 hatrany ireo sitrana Etsy andaniny, nidina tahaka izany koa ny isan’ireo marary mafy. Latsaky ny 100 avokoa izany, nanomboka ny 15 aogositra teo, hatramin’ny omaly. Ankoatra izany, niakatra be nihoatra ny 100 hatrany ireo sitrana. Tafakatra 221 aza izany ny 15 aogositra lasa teo. Araka izany, nisy fidinany avokoa ny isan’ireo maty sy ny tranga vaovao tao anatin’ny herinandro ary nitombo be kosa ny isan’ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana.Synèse R.Miisa 64 ny tranga vaovao, omaly, ka avy eto Analamanga ny 39 amin’izany. Miisa 168 kosa ireo sitrana. Iray kosa ny lavon’ny Covid-19 ka avy any Ihorombe izy io. Tafakatra 178 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity eto amintsika. Miisa 76 ireo marary mafy, “forme grave”. Miisa 54 432 ny fitiliana PCR vita raha 5 012 kosa izany ho an’ny eo anivon’ny GenExpert. 14 218 ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Tafakatra 13 206 kosa ireo sitrana ary miisa 834 sisa ireo mbola manaraka fitsaboana.L’article Nihena ny firongatry ny valanaretina : miisa 14 ireo lavon’ny Covid-19 tao anatin’ny herinandro a été récupéré chez Newsmada.